विद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने हो ?,यसरी भर्नुहोस् अनलाइन फाराम – Recent Nepal News
विद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने हो ?,यसरी भर्नुहोस् अनलाइन फाराम	काठमाडौं,पुस २५ – उर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममा लगानी गर्नको लागि सरकारले सर्वसाधारणसँग अनलाइनमार्फत लगानी प्रतिबद्धता माग गरेको छ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार लगानी प्रतिबद्धता माग्न वेबसाइट सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त वेबसाईट मार्फत सर्वसाधारणले लगानी गर्न चाहेमा त्यसको लागि कुनै पनि ठाउँमा लाइन नलागेर अनलाइनबाट सेयर आवेदन भर्न सक्नेछन् ।
सरकारले नेपालमै रहेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका र गैरआवासीय नेपालीहरुबाट पनि नेपालको आयोजनामा लगानी गराउने लक्ष्यको साथ त्यसको सुरुवात गर्दै पहिलो चरणमा अनलाइनमार्फत लगानी प्रतिबद्धता मागिएको हो। सर्वसाधारण नेपालीले अप्पर अरुण, दूधकोशी, तमोर, सुनकोसी ३, लाङटाङ, नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला १ आयोजनामा शेयर लगानी गर्न सक्छन्।
यसमा सरकारी तथा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था, कल्याणकारी कोषहरु, रेमिट्यान्टस, सरकारी तथा निजी कर्मचारी, मजदुर तथा किसानहरुले प्रत्यक्ष शेयर लगानी गर्न पाउने छन् । सामान्य जलविद्युत् आयोजनाले सीमित सङ्ख्यामा सेयर आह्वान गर्दा अर्बौं लगानीको माग हुने गरेको सन्दर्भलाई विचार गरेर सरकारले सहज रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट नै सेयर आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
जलविद्युत् लगानी तथा उत्पादन कम्पनीले रु दुई अर्बको सेयर जारी गर्दा रु ४३ अर्बको आवेदन परेको थियो भने अन्य केही साना जलविद्युत् आयोजनाले साधारण सेयर जारी गर्दा न्यूनतम २०० प्रतिशत बढी सेयर आवेदन हुने गरेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी सरकारले पहिलो चरणमा सेयरको प्रतिबद्धता पत्र माग गर्ने वातावरण बनाएको हो । नागरिकले कति रकम लगानी गर्न चाहेका हुन् सोही आधारमा सेयर प्रमाणपत्रसमेत दिइने भएकाले त्यसले लगानीको सुरक्षा एवम् प्रतिफलको सुनिश्चितता समेत गर्नेछ ।
कसरी भर्ने आवेदन ?
सबैभन्दा पहिला http://www.moenonline.moen.gov.np/login लगइन गर्ने। त्यसपछि तपाईंसँग लगइन मागिन्छ। तपाईं नयाँ भएकाले ‘क्रिएट न्यु एकाउन्ट’ मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि त्यहाँ तपाईको आधिकारिक इमेल मागिन्छ। पासवर्ड तपाईले इमेलमै प्रयोग गरिरहेको राख्नुपर्छ भन्ने छैन, जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि वेसाइट खुल्छ। त्यसपछि तपाईले पेज खोलेको होरहोइन भनेर नोटिफिकेसन तपाईको इमेलमा जान्छ। इमेलमा गएको लिंकलाई तपाईले क्लिक गरेपछि तपाईको ‘युजर आइडी’ एक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि पेजमा ‘शेयर लगानी प्रतिबद्धता फारम भर्नुहोस्’ भन्ने लेखेको देख्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर व्यक्तिगत विवरण भर्नुस्।
विवरण भरेपछि अर्को पेज खुल्छ जहाँ तपाई कस्तो खालको लगानीकर्ता हो भनेर जान्न खोजिएको छ। त्यहाँ तपाई आमनागरिक हो कि गैरआवासीय हो वा वैदेशिक रोजगारीमा पो हुनु हुन्छ कि सरकारी जागिर हो भनेर सोधिएको हुन्छ। त्यसको उत्तर दिएपछि तपाईको परिवारको संख्या, आय स्रोतका बारेमा अर्को पेजमा विवरण भर्नुपर्छ।
त्यसपछि नागरिकताको विवरण मागिन्छ। अर्थात नागरिकता नम्बर, जारी गर्ने जिल्ला र जारी मिति। यो विवरण भरेपछि तपाईको इच्छाएको व्यक्तिका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ। अनि तपाईको लगानीको योजनाका बारेमा सोधिन्छ। त्यसको विवरण भरेपछि तपाईले सुरुदेखि भरेको विवरण सही छ कि छैन वा त्यसमा केही हेरफेर पो गर्न चाहनु हुन्छ कि सोधिन्छ। त्यो स्टेप पार भएपछि तयार भएको फारम सबमिट गर्नुपर्छ। यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले तपाईको विवरणका आधारमा सम्पर्क गर्छ।
सन् २०४० मा न्यूनतम ५१ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक
कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगले नेपालमा विद्युत् मागबारे विस्तृत रिपोर्ट तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल १७२१ मेगावाट विद्युत्को माग रहेको छ । जब कि यो माग सन् २०२० सम्म न्यूनतम पनि ६ हजार ८ सय १४ मेगावाट आवश्यक हुने बताइएको छ । त्यस्तै, २०२५ सम्म १० हजार ८ सय, २०३० १८ हजार सम्म, २०३५ सम्म २९ हजार र २०४० सम्म ५१ हजार मेगावाट आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै, तिला १ आयोजनामा सरकारको समेत शेयर रहने गरी तिला दुवै आयोजनामा कर्णाली प्रदेशका हरेक घर परिवारवाट १ लाख ईक्वीटी सेयर रहने गरी लगानी गर्न डेभलपरसँग सहमति भएको मन्त्री शर्माले बताए । त्यसको छिट्टै काम सुरु हुने पनि उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले १० हजार मेगावाटसम्म टेक अर पे नीति लागू गर्ने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगाइएको लगानीको बैंकिङ ब्याजदर घटाउने र ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गरिएको छ । डलर पीपीएको रिस्क कम गर्न हेजिङ्ग फण्ड बनाउने निर्णयार्थ अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको पनि जनाइएको छ । रु. ५० लाख भ्याट छुट दिने प्रस्ताव अन्तिम चरणमा रहेको र पोष्टरेटको कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति माग गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल अभियानलाई देशव्यापी वनाउन काठमाडौ उपत्यकासहित, काभ्रे, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, तनहुँ, वाग्लुङ्ग, स्याङ्गजा लोडसेसिडङ्ग मुक्त गरिएको जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै, अन्य स्थानहरुमा समेत लोडसेडिङमुक्त गर्दै जाने गरी प्राविधिक र अन्य तयारी गरी चुनौतीलाई थप बढाइएको पनि जनाइएको छ ।
Previousतपाईलाई थाहाँ छ ? सपनामा सर्पदेखे राम्रो की नराम्रो ?
Nextजलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तय